Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fampitandremana momba ny sakafo ho an'ny marika an'izao tontolo izao
Global Vegetarian Foods Corp dia mahatadidy ny marika Happy Veggie World marika Vege Chicken Breast ary marika Vegefarm Vege Stewed Lamb Chunk avy eny an-tsena satria mety misy atody izay tsy voalaza amin'ny marika. Ny olona manana allergy amin'ny atody dia tsy tokony hihinana ireo vokatra tadidy voalaza etsy ambany.
Ny fanairana fampahatsiahivana momba ny sakafo navoaka tamin'ny 14 Oktobra 2021, dia nohavaozina mba hahitana fampahalalana fanampiny amin'ny fizarana. Ity fampahalalana fanampiny ity dia fantatra nandritra ny famotopotorana momba ny fiarovana ny sakafo ara-tsakafon'ny Canada Food Inspection Agency (CFIA).
Ireto vokatra manaraka ireto dia namidy tany Alberta sy British Columbia ary mety nozaraina tany amin'ny faritany sy faritany hafa.
Tontolo sambatra Veggie Nono akoho anana 4 pcs 131218 Ny kaody rehetra izay tsy ambara amin'ny atody ny atody
Legioma Zavamaniry zanak'ondry voaangona 3000 h 4 713224 372285 Ny kaody rehetra izay tsy ambara amin'ny atody ny atody
Jereo raha manana ireo vokatra tadidy ao an-tranonao ianao. Ireo vokatra tadidy dia tokony hatsipy na haverina amin'ny magazay nividy azy ireo.
Raha tsy mahazaka atody ianao dia aza laniana ireo vokatra tadidy fa mety hiteraka fihetsika matotra na mandrahona ny ainy izany.
Ity fahatsiarovana ity dia nateraky ny orinasa. Ny CFIA dia manao fanadihadiana momba ny fiarovana ny sakafo, izay mety hitarika ny fampahatsiahivana ireo vokatra hafa. Raha tadidio ireo vokatra hafa mety hampidi-doza, dia hampandre ny besinimaro amin'ny alalàn'ny fampitandremana momba ny Food Recall Warnings ny CFIA.
Tsy nisy ny fanehoan-kevitra mifandraika amin'ny fihinanana ireo vokatra ireo.